» गुण्डा नाइके भनेर चिनिने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङ्गेकी श्रीमती दिक्षेन डोल्मा लामा पक्राउ,आखिर किन पक्राउमा परिन? हेर्नुहोस गुण्डा नाइके भनेर चिनिने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङ्गेकी श्रीमती दिक्षेन डोल्मा लामा पक्राउ,आखिर किन पक्राउमा परिन? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
गुण्डा नाइके भनेर चिनिने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङ्गेकी श्रीमती दिक्षेन डोल्मा लामा पक्राउ,आखिर किन पक्राउमा परिन? हेर्नुहोस
काठमाडौं – गुण्डा नाइके भनेर चिनिने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङ्गेकी श्रीमती दिक्षेन डोल्मा लामा पक्राउ परेकी छिन्। लामालाई मंगलबार कास्की प्रहरीको आग्रहमा मकवानपुरको पोखरीयाबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे)की ३४ वर्षीया श्रीमती दिक्छेन लामालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनलाई बुधबार कास्की पुर्‍याइएको प्रहरीले जनाएको छ। लामाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा डाँका मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीको पक्राउ पूर्जी अनुसार दिक्छेनलाई हेटौंडाबाट पक्राउ गरी पोखरा (कास्की) पठाइएको हो ।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकी दिक्छेनले दिक्छेनमाथि पोखरा १० रक्षामार्गको एक घरबाट बहुमूल्य धातु डाँकाचोरी गरेको आरोप छ। कात्तिक ८ गते डाँकाचोरी गरेको जाहेरी मंसिर ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको डिएसपी हमालले जनाए। २० लाख रुपैयाँ जतिका बहुमूल्य धातु र मूर्ति लगायत धनमाल लामाले डाँकाचोरी गरेको आरोप छ। चोरी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत कास्कीमा डाँकाचोरी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ ।
दिक्छेन हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१२ पदमपोखरीस्थित माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् । २५ वर्षकी उनका १० वर्षका छोरा छन्। श्रीमतीको पक्राउ परेसंगै सांसद मनाङेले पनि मुख खोलेका छन् । सामाजिक संजाल मार्फत आफ्नी श्रीमती बदमास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले श्रीमती दिक्छेन पक्राउ परेको आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट पुष्टि गरेका छन्।
‘ऊ बदमास हो,’ उनले भने, ‘मैले नै प्रहरीलाई भनेर पक्रन लगाएको हो।’ डेढ महिनादेखि हराइरहेको र पछि माइती हेटौंडाको पदमपोखरी बसेकी छन् भन्ने पत्ता लगाएर आफूले नै प्रहरीलाई खबर गरी पक्रन भनेको उनले सुनाए। ‘मेरो श्रीमती हो भनेर उम्कन दिनुहुन्न,’ सांसद गुरुङले भने, ‘बदमासी गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्नुपर्छ, नेताको श्रीमती हो, छोराछोरी हो, दाजुभाइ हो, आफन्त हो भनेर कसैलाई पनि छोड्न हुन्न।’
उनको स्टाटस तल जस्ताको तस्तै पढ्नुहोस : डेढ म​हिना बाट घ​र छोडी हिडेप​छि हामी अल​ग थियौ बिच​मा श्रीम​तीले कसैको चोरी ग​री ब​द​मासी ग​रेको थाहा पाएप​छि मैले कास्की जिल्ला प्र​शास​न​लाई कार​बाही ग​र्न​ माग ग​री अहिले प​क्राउ ग​रेको हो।म​ सांस​द भ​एनि मेरो प​रिवार​मा जो कोही होस चाहे श्रीम​ती , छोरा छोरी दाजुभाई ब​द​मास​ ग​रेप​छि कडा भ​न्दा कडा कार​बाही ग​र्नुप​र्छ​।त्य​सैले जो कोही नेताज्युह​रुको प​रिवार वा ठुला ठुला कर्म​चारीह​रुको प​रिवार​ह​रुले ब​द​मासी ग​रे प​नि कडा कार​बाही हुनुप​र्छ​ भ​न्ने प​नी माग​ ग​र्द​छु॥। कानुन स​बैलाई स​मान हो।